Yintoni “Izitshixo ZoBukumkani”? | Imibuzo YeBhayibhile
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiBhulu IsiBislama IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFaroese IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikamba IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKongo IsiKorea IsiKwanyama IsiLingala IsiLithuania IsiLuo IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPhuthukezi(sasePortugal) IsiPolish IsiQuechua (saseCuzco) IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSesotho (South Africa) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTigrinya IsiTiv IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiVenda IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba isi-Igbo
“Izitshixo zoBukumkani” zimela igunya lokuvulela abantu ithuba ‘lokungena eBukumkanini bukaThixo.’ (Mateyu 16:19; IZenzo 14:22) * UYesu wanika uPetros “izitshixo zoBukumkani bamazulu.” Oku kuthetha ukuba uPetros wafumana igunya lokuchazela abantu abathembekileyo ukuba xa befumana umoya oyingcwele kaThixo, banokungena eBukumkanini bamazulu.
Kwavulelwa oobani ngezi zitshixo?
UPetros wasebenzisa igunya awayelinikwe nguThixo ukuze avulele amaqela amathathu indlela yokungena eBukumkanini:
AmaYuda nabantu ababeguqukele ebuYudeni. Emva kokufa kukaYesu, uPetros wakhuthaza isihlwele samaYuda angamakholwa ukuba amkele uYesu njengokhethwe nguThixo ukuba alawule eBukumkanini. UPetros wababonisa into abamele bayenze ukuze basindiswe. Wabavulela indlela yokungena eBukumkanini ibe abantu abaninzi ‘balamkela ilizwi.’​—IZenzo 2:​38-​41.
AmaSamariya. Kamva uPetros wathunyelwa kumaSamariya. * Waphinda wasebenzisa isitshixo soBukumkani, ekunye nompostile uYohane xa ‘bawathandazelayo ukuba afumane umoya oyingcwele.’ (IZenzo 8:​14-​17) Oku kwavulela amaSamariya ithuba lokuba angene eBukumkanini.
Iintlanga. Emva kweminyaka emithathu enesiqingatha uYesu efile, uThixo watyhilela uPetros ukuba iintlanga (abantu abangengawo amaYuda) zaziza kufumana ithuba lokungena eBukumkanini. Emva koko uPetros wasebenzisa esinye sezitshixo ngokushumayela kwiintlanga, ezivulela ithuba lokufumana umoya oyingcwele, lokuba ngamaKristu nelokuba nethemba lokulawula eBukumkanini.​—IZenzo 10:30-​35, 44, 45.
Kuthetha ukuthini “ukungena eBukumkanini”?
Abo ‘bangena eBukumkanini’ balawula noYesu ezulwini. IBhayibhile yachaza ukuba babeza ‘kuhlala ezitroneni’ baze ‘balawule njengookumkani phezu komhlaba.’​—Luka 22:29, 30; ISityhilelo 5:​9, 10.
Ubuxoki obuthethwayo ngezitshixo zoBukumkani
Ubuxoki: NguPetros ogqibayo ukuba ngubani onokungena ezulwini.
Inyaniso: IBhayibhile ithi nguKristu uYesu, kungekhona uPetros, ‘ogweba abaphilayo nabafileyo.’ (2 Timoti 4:​1, 8; Yohane 5:​22) UPetros watsho ngokwakhe ukuba nguYesu ‘omiswe nguThixo ukuba abe ngumgwebi wabaphilayo nabafileyo.’​—IZenzo 10:34, 42.
Ubuxoki: Amazulu ayesiva ngoPetros ukuba ufuna ukuzisebenzisa nini izitshixo zoBukumkani.
Inyaniso: Xa uYesu wayethetha ngezitshixo zoBukumkani, wathi kuPetros: “Nakuphi na okubopha emhlabeni kubotshwe nasemazulwini, kuthi nakuphi na okukhululayo emhlabeni kukhululwe nasemazulwini.” (Mateyu 16:19) Nangona abanye abantu becinga ukuba la mazwi athetha ukuba amazulu ayesiva ngoPetros, isenzi sesiGrike samandulo sibonisa ukuba izigqibo zikaPetros zaziza kulandela izigqibo esele zenziwe ezulwini.
Ezinye iivesi zeBhayibhile zithi uPetros wayeyalelwa ezulwini ukuba azisebenzise nini izitshixo zoBukumkani. Ngokomzekelo, nguThixo owathi makasebenzise isitshixo sesithathu.​—IZenzo 10:19, 20.
^ isiqe. 3 Ngamanye amaxesha, iBhayibhile isebenzisa igama elithi “isitshixo” ukuze ibhekisele kwigunya nomsebenzi womntu othile.​—Isaya 22:20-​22; ISityhilelo 3:​7, 8.
^ isiqe. 7 Unqulo lwamaSamariya lwalahlukile kwelamaYuda kodwa ezinye iimfundiso zawo nezinye izinto ayezenza ayezithatha kuMthetho kaMoses.
UBukumkani BukaThixo Imibuzo YeBhayibhile Iyaphendulwa